I-Chic Modern 1 Bedroom Retreat (i-suit med term let) - I-Airbnb
I-Chic Modern 1 Bedroom Retreat (i-suit med term let)
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Giles
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Giles izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi elisezingeni eliphezulu elisanda kulungiswa kabusha elingu-1 elinedizayini emnandi, ehlanzekile kanye nokunaka okukhulu kwemininingwane kuzo zonke izindawo. Indawo enhle ongachitha isikhathi e-Dublin eseduze ngokwanele enhliziyweni yesenzo ongaya ngaso e-Temple Bar emizuzwini eyi-15, kodwa ekude ngokwanele ukuthi uzokwazi ukuphumula ngemva kosuku olumatasa endaweni ethule futhi unethezekile. isikhala. Lokhu apt kuwuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya e-Guinness nase-The National Museum futhi uhambo lwamaminithi ayi-10-15 kuphela ukuya ePhoenix Park, I-IMMA nokuningi!
Ifulethi lethu liyifulethi elilungiswe kahle elinekamelo elilodwa elifakwe umbhede othokomele osayizi wenkosi onomatilasi onethezekile, izinto zasekhishini ezididiyelwe ezisezingeni eliphakeme, ama-counter-tops e-quartz (anezibani ezingaphansi kwekhawunta ye-LED) kanye negumbi lokugezela lesimanje elinothayela elinobumba. Iyifulethi ekahle yabahambi abambalwa abanokhiye ophansi futhi ihlanzekile, iyakhanya, ithokomele, ivikeleke ngokwedlulele futhi ithule.
Nethezeka ekhishini/indawo yokuhlala evulekile njengoba ubuka i-TV noma i-Netflix ngenkathi upheka isidlo sakusihlwa sokuzenzela, thola ithuba lokufunda leyo ncwadi ongalitholi ithuba lokucwiliswa kuyo, noma ujabulele inkomishi yekhofi i-balcony encane enamaqabunga.
Yazi futhi ukuthi okukhanga kakhulu e-Ireland I-Guinness Storehouse isendlini yakho ngokoqobo - indlela enhle yokuqala noma yokuqeda uhambo lwakho futhi okumelwe ukwenze. ICEBISO - thola ikhofi elimnandi noma ukudla okulula ku-Container Coffee (ngokoqobo ngaphakathi kwesiqukathi sokuthutha) e-Thomas St okuwuhambo lwemizuzu emi-2 kuphela ukusuka efulethini.
4.74 · 118 okushiwo abanye
Le ndawo iphelele uma ungathanda ukuba senkabeni yedolobha emgwaqeni othule. Ngokuqondile ngaphesheya koMfula i-Liffey (ibhlokhi kude nefulethi) uneSmithfield lapho uzothola khona iJameson Distillery. I-Smithfield iyindawo enhle egcwele ubuntu futhi inezindawo zokudlela ezihamba phambili, amathilomu nemigoqo enhlokodolobha.
Kuhle ukuya ku-O'Connell street, phakathi nemizuzu engu-20 uzofika ebhulohweni lethu elihle elimhlophe i-Ha'penny Bridge elakhiwa ngo-1816. Kusukela lapha ungakwazi ukufinyelela kalula ku-O'Connell Street, Trinity College, Temple Bar kanye ne- isithonjana sokuthenga umgwaqo Grafton Street.
Ngaphakathi kwebanga lokuhamba lendawo uneMnyuziyamu Yezobuciko Zokuhlobisa Nomlando ekhombisa impilo yabantu e-Ireland. Uphinde ube neGuinness Storehouse kanye neJameson Distillery zombili ezihlinzeka ngohambo lwe-distillery. Futhi ngaphakathi kwebanga lokuhamba i-Phoenix Park - enye yezindawo ezinkulu eziklanywe kunoma yiliphi idolobha laseYurophu futhi iqukethe enye yama-zoo amadala kakhulu emhlabeni. Ungakwazi futhi ukuqasha amabhayisikili lapha (iya kwesokunxele emnyango omkhulu) futhi uthathe uhambo lokuzilibazisa uzungeze ipaki ngamasondo angu-2 - kunconywe kakhulu futhi kuyindlela enhle yokuhlola izilwane zasendle zasendaweni ezihlanganisa izinkulungwane zezinyamazane (oqinisekisiwe ukubona).
Ngizotholakala ngocingo noma ngemiyalezo ye-Airbnb kukho konke ukuhlala kwakho ngosizo lwethimba lami labasekeli.